Zefania 2: 1-15
Zefania 1 Zefania 2 Zefania 3
MIANGôNA, eny, mivoria hianareo, Ry firenena tsy manan-kenatra [Na: tsy manina],
Mitadiava an'i Jehovah, hianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany, Izay efa nanaraka ny fitsipiny Tadiavo ny fahamarinana, Tadiavo ny fandeferana; Angamba ho voafina hianareo amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah.
Fa hafoy Gaza, ary ho lao Askelona; Horoahiny mitataovovonana Asdoda, Ary hofongana Ekrona.
Lozan'ny mponina any amoron-tsiraka, Dia ny firenen'ny Kereita! Mihatra aminareo ny tenin'i Jehovah, Ry Kanana, tanin'ny Filistina! Haringako tsy hisy mponina eo aminao.
Ary any amoron-tsiraka dia ho tonga tany fiandrasana ondry, izay mizy zohy fialofan'ny [Na: trano-bongon'.] mpiandry ondry, Sy ho valan'ondry aman-osy,
Efa reko ny fandatsàn'i Moaba Sy ny fanaratsian'ny taranak'i Amona, Izay nandatsany ny oloko Sy nireharehany teny amin'ny sisin-tany.
Hianareo Etiopiana koa,-- Ho voatrabaky ny sabatro hianareo. [Heb. izy]
Ary hisy andiany handry ao aminy, Dia fivorian'ny karazam-biby sy hafa, Sy sama sy ny sokina hitoetra ao amin'ny kapitaliny; Feo mikiririoka no ho re ao am-baravarankely, Ary fandravana no ho eo an-tokonana, Fa hendahany ny rafitra sedera.
Izany no tanàna niravoravo sady nandry fahizay, Izay nanao anankampo hoe: Izaho no izy, ary tsy misy hafa; Endrey! efa tonga lao izy, eny, fandrian'ny biby! Izay rehetra mandalo azy dia hisitrisitra sy hanondro tànana.